Maxaa Ka Jira In Somaliland Qaabilayso Qaxooti Afghanistan Ah ? | Gaaroodi News
Maxaa Ka Jira In Somaliland Qaabilayso Qaxooti Afghanistan Ah ?
Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ilaa iyo haatan aysan jiriin meel ay ku gashay heshiis gudaha Soomaliland lagu keenayo dadka ka soo baxsanaya dalka Afghaanistaan.
Waxaana arrintan ay imaanaaysaa xili ay jiraan warar sheegaya in ay socdaan wadahadallo Somaliland lagu keenayo qaxooti reer Afqaanistaan ah.
Jimicihii ayaa ay ahayd markii warbaahintii AFP baahisay war ay ku sheegaysay in Somaliland ay oggolaatay “mabda’a ahaan” in ay qaabisho qaxootiga ka imanaya Afgaanistaan.
Waxaana ay sheegeen in ay ka soo xigteen sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda , iyada oo tobanaan kun oo qof ay si aad ah uga qaxayaan waddanka ay dagaalladu halakeeyeen ka dib markii ay Taliban qabsadeen horaantii bishan.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in wadahadal u furmay Somaliland iyo dawladda Maraykanka.
“Wararkaa lagaga hadlayo qaxooti Afghanistan ee Somaliland imanaya, weli dawladda somalaildn si cad uma hayso. Wararkaa la isla dhex marayaana caddayn ma jirto, waxaannuna halkan ku caddaynaynaa in aannaan illaa iyo hadda wakhtigan aannaan cid siin qaxooti” ayuu BBC-da u sheegay wasiirka warfaafinta eee Somaliland, Saleebaan Yuusuf Cali koore.
Laakiin dhanka kale wasiirka ayaa sheegay in haddii loo soo bandhigo ay ahaan doonto mid marta meelihii loogu talo galay sida waaxaha diblomaasiyadda.
“Waayaha iyo wakhtigu hadduu keeno, goobteeda iyo meesheeda ayaa lagaga hadli doonaa”
Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale Uganda kala xaajoonaysay qaabilaadda qaxootiga. Arbacadii, diyaarad u kireysneyd oo siday 51 reer Afgaanistaan ah – oo isugu jira rag, haween iyo carruur – ayaa ka degtay waddanka ku yaal Bariga Afrika, iyadoo la filayo in dad badan oo la daad -gureeyo ay yimaadaan maalmaha soo socda.Daadgureynta ayaa jawaab u ahayd codsi ka yimid Washington oo ahaa inay si ku meel gaar ah u martigeliso “dadka halista ku jira” muwaadiniinta Afgaanistaan ee ku sii jeedda Mareykanka iyo meelaha kale ee adduunka oo dhan, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibedda ee Uganda.Warbaahinta ayaa sheegeysa in Kampala ay ogolaatay inay qaxooti gaarayaan 2,000 laakiin taasi lama xaqiijin.Horraantii toddobaadkan, aasaasaha dugsiga keliya ee hoyga ah ee Afgaanistaan ayaa sheegay in ku dhawaad 250 gabdhood oo iskuuley ah, macallimiin iyo shaqaale ay u guuri doonaan Rwanda si ay u sii wataan waxbarashadooda dhowrka bilood ee soo socda. Dad badan ayaa doonaya in ay dalkaasi ka baxaan.
Dhanka kalena waddammada reer galbeedka ee maraykanka iyo xulafadiisa Nato ayaa muddooyinkii u danbeeyeyba la baxayey muwaadiniintooda iyo shaqaalahoodii waddankaas. Waxaana dalal badan dhanka kalena soo gebagabeeyeen hawlgalkoodii daad guraynta. Inkasta oo Maraynkanku sheegay in uu sii wadayo qorshaha daadguraynta.
Isku soo wada duuboo, in ka badan 110,000 oo qof – oo isugu jira muwaadiniinta reer Afgaanistaan iyo ajaanib – ayaa laga daadgureeyay garoonka diyaaradaha ee Kabul tan iyo markii duulimaadka la bilaabay laba toddobaad ka hor.
Sabtidii, diyaaraddii ugu dambaysay oo Talyaanigu leeyahay oo Afgaanistaan ka duusha ayaa gaartay magaalada Rome. Talyaaniga ayaa sheegay inay Kabul ka soo daadgureeyeen ku dhawaad 5,000 oo muwaaddiniin Afgaanistaan ah – waana tiradii ugu badnayd ee gaarta dalalka Midowga Yurub.
Faransiisku wuxuu sheegay inay bixiyeen in ka badan 2,800 tan iyo 17kii Ogoosto, halka Jarmalku sheegay inay qaadeen ilaa 4,000 oo reer Afgaanistaan ah.
Madaxa ciidamada qalabka sida ee UK, General Sir Nick Carter, ayaa sheegay in ay tahay wax laga naxo in aysan awoodin in ay badbaadiyaan qof walba